Shiinaha Tayada Shiinaha qiimaha Shiinaha MVP1166 Xarunta Mashiinka Soosaarka iyo Warshadda | BiGa
Tayada Taiwan qiimaha Shiinaha MVP1166 xarunta Mashiinka
Model Cutub MVP 1166
Cabbirka miiska mm (inji) 1200 × 600 (48 × 24)
Xamuulka ugu badan Kg (lbs) 800 (1763.7)
Safarka X-dhidibka mm (inji) 1100 (44)
Y - safarka dhidibka mm (inji) 600 (24)
Z - safarka dhidibka mm (inji) 600 (25)
Fogaanta min sanka miiq ilaa miiska mm (inji) 120-720 (4.8-28.8)
Fogaanta laga bilaabo xarunta dunmiiqa illaa dusha tiirarka mm (inji) 665 (26.6)
Xawaaraha (X / Y / Z) faasaska m / min (inch / min) 36/36/30
(X / Y / Z) xawaaraha xawaaraha ku socda m / min (inch / min) 1417.3 / 1417.3 / 1181.1
(10.1 / 14.8)
Howlsocodsiinta gawaarida gawaarida X, Y, Z (kw / hp) 3.0 / 3.0 / 3.0
Meesha sagxadda mm (inji) 3900 × 2500 × 3000
(129.9 × 98.4 × 118.1)
Miisaanka kg (lbs) 7800 (17196.1)
Intii lagu gudajiray shirkii fuselage, geeddi-socod kasta waxaa lagu xakameynayaa tayada iyadoo loo eegayo 50% dulqaadka heerka qaran, taas oo si wax ku ool ah u yareynaysa guud ahaan weecashada ay keentay qaladka isugeynta. Ka dib markii shirkii la dhammeeyo, 72 saacadood oo mashiinka nuqul ka sameynta ah ayaa la sameeyaa si loola socdo tilmaamayaasha kala duwan sida buuqa, gariirka, dhaqdhaqaaqa degdegga ah, iyo beddelka qalabka. Qalabka horumarsan sida isdhaxgalka leysarka, baarka kubada, qalabka dheelitirka firfircoon iyo aaladda wax lagu cabbiro ee seddex isku xir ah ayaa loo isticmaalaa in lagu baaro qalabka mashiinka, qeybaha baaritaanka tijaabada qaybaha, baaritaanka goynta culus iyo baaritaanka adag si loo hubiyo, si loo hubiyo in dhamaan bandhigyada ay la kulmaan tayada sare ee warshada shuruudaha.
1. Heerkulka hawlgalka ee deegaanka qalabka: 10 ℃ ~ 40 ℃.
2. Qoyaanka qaraabada ee isticmaalka deegaanka: waa in lagu xakameeyaa 75%.
3. Qalabku waa inuu ka fogaadaa shucaaca iyo gariirka ilaha kale ee kuleylka sare si looga fogaado qaladka qalabka mashiinka ama luminta saxnaanta qalabka mashiinka.
4. Danab: 3 weji, 380V, isbedbeddelka danab ee ku kacaya ± 10%, inta jeer ee awoodda: 50HZ.
Haddii danabku ku yaal aagga isticmaalka aanu degganayn, aaladda mashiinka waa in lagu qalabeeyaa koronto nidaamisa si loo hubiyo hawlgalka caadiga ah ee qalabka mashiinka.
5. Cadaadiska Hawada: Si loo hubiyo waxqabadka shaqada caadiga ah ee qalabka, haddii hawada cufan ee isha hawo ay buuxin weydo shuruudaha isha, waa in lagu daro qalab nadiifinta isha (hawo-soo-saarid, hoos u dhigid, sifeyn). ka hor hawada qaadashada qalabka mashiinka.
6. Qalabka mashiinku waa inuu lahaadaa dhul lagu kalsoonaan karo: siligga dhulku waa silig naxaas ah, dhexroorka siliguna waa inuusan ka yarayn 10mm², caabbinta dhulkuna way ka yar tahay 4 ohms.
7. siligga dhulka ee qalab kasta oo mashiinka CNC ah waa inuu ku xirnaadaa ul gaar ah.
8. Habka dhulka: U kaxee ul bir ah oo dhexroorkeedu yahay Φ12mm dhulka hoostiisa 1.8 ～ 2.0m. Siligga dhulka (dhexroorka siliggu kama yarayo dhexroorka xarigga korontada) waa in si kalsooni leh loogu xiraa usha dhulka leh boolal.
Xiga: EDM Hole Drill Mashiinka (GZ8-F / L)
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Dhufto Double-End, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha Sare, Nooca Gawaarida Mashiinka Mashiinka, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Cagaaran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Hal-Dhamaystiran,